Manisha Koirala’s father talks about his daughter – Nepali Movies
Manisha Koirala’s father talks about his daughter
Prakash Koirala, father of Bollywood actress Manisha Koirala, talks about his daughter with Nayapatrika.
बाबु प्रकाश कोइरालाको नजरमा छोरी मनिषा
मनीषा हाम्रो परिवारका अरू बच्चाभन्दा फरक थिई । सानैदेखि ऊ फरक सोच्थी । जे सोच्थी, त्यो हाम्रो सामान्य सोचाइभन्दा बिल्कुल भिन्न हुन्थ्यो । बाल्यकालदेखि नै कलाप्रति विशेष लगाव राख्थी । किशोरावस्थामा पुग्दा नपुग्दै, टेलिभिजनमा आएका फिल्म ध्यान दिएर हेर्ने, कलाकारले फिल्ममा निर्वाह गरेका भूमिका र अवस्थाका आफ्नै शैलीमा व्याख्या गर्ने बानी उसमा विकास भइसकेको थियो । नाटक खुब हेर्थी । सहरमा हुने जुनसुकैखाले कला प्रदर्शनीमा उसलाई जानैपथ्र्यो । नाटक हेरेर आएपछि साँझ मसँग बसेर त्यसको कथा र पात्रका अभिनयबारे कुरा गर्न उसलाई मज्जा लाग्थ्यो । आफ्ना आँखाले देखेको सबै कुराप्रति उसलाई जिज्ञासा हुन्थ्यो । ‘बाबा, यो के हो ? यसो किन भएको ? किन यस्तो नभएको ?’ भनेर प्रश्न गरिरहन्थी । साह्रै जिज्ञासु स्वभावकी केटी हो मनीषा । म खुब रोएँ । त्यो खुसीको आँसु थियो । यस घटनापछि मनीषा ‘सिरियस’ बिरामी परेको मलाई सम्झना छैन ।
मनीषालाई म ‘तँ’ भनेर बोलाउँछु । ऊ मलाई ‘तिमी’ भन्छे । परिवारमा अग्रजले मलाई ‘तिमी’ भनेको सुनेर उसले पनि त्यही सिकी । मनीषा सानो छँदा उसको हजुरबा (बिपी कोइराला) उसलाई पिठयँुमा बोकेर यता-उता डुलाइरहनुहुन्थ्यो । मुखमा पाइप च्यापेर धुवाँ उडाउँदै मनीषालाई बगैँचामा डुलाउनु बिपीको सोख थियो । मनीषा घरमा नभएको दिन बिपी दिक्क मान्नुहुन्थ्यो । ऊ यति चुलबुले थिई कि हजुरबाको ढाडमा बसेर जिस्किरहन्थी । हजुरबा पनि त्यसमा रमाइलो मान्नुहुन्थ्यो । बिपीको पहिलो नातिनी थिई मनीषा । राजनीतिक काम लिएर भेट्न आउने साथीलाई उहाँ ‘ऊ मनीषा, मेरी नातिनी’ भनेर चिनाउनुहुन्थ्यो । मनीषा रोएको उहाँ देख्न सक्नुहुन्नथ्यो । मनीषालाई हेर्दै बिपी भन्नुहुन्थ्यो, ‘तँलाई पढेर जे बन्न मन लाग्छ, त्यही बन्नू ।’
मनीषा राम्रै पढ्थी । कक्षामा टाठी थिई । सरसँग सवाल-जवाफ गर्थी । स्कुलमा नाटक हुँदा मुख्य भूमिकामा खेल्थी । उसका मास्टरहरू भन्थे, ‘मनीषा पढ्नमा तेज छे । ऊ जुन विषयमा पनि राम्रो गर्न सक्छे ।’ उनीहरू त यतिसम्म भन्थे कि पढाइबाहेक कलाका अरू कुनै क्षेत्रमा पनि आफूलाई राम्रोसँग उभ्याउन सक्छे मनीषा । स्कुलका मास्टरहरू भन्ने गर्थे, ‘उसमा एउटा यस्तो क्षमता छ, यस्तो मिहिनेत गर्ने स्वभाव छ, ऊ जे चाहन्छे, त्यो फत्ते गरेरै छाड्छे ।’
तर, सानोमा मनीषा धेरै केटाकेटीले भन्ने गरेझैँ ‘डाक्टर बन्छु,’ भन्थी । शेखर डाक्टर बनेको उसले देखेकी थिई । त्यसैले भनेकी होला । संयुक्त परिवारमा हुर्किएकी हो मनीषा । घरको वातावरण नै ‘पढ्नुपर्छ’ भन्ने थियो । परिवारका सबैजना पढ्नमा अगाडि थिए । माहोल राजनीतिक भए पनि पढाइ सबैको केन्द्रमा थियो, प्राथमिकतामा पथ्र्याे । हाम्रो घरको परम्परा नै यस्तो थियो कि छोरी-बुहारीले पढाइबाट कहिल्यै वञ्चित हुनुपर्दैनथ्यो । बिपी परिवारका सबैलाई पढ्न प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो ।
परिवारका अरू सदस्यभन्दा मनीषाको सपना बिस्तारै फेरिएको महसुस गर्थें म । कलामा उसले गहिरो अभिरुचि लिन थालेकी थिई । खाली समय बगैँचामा डुल्न निस्कन्थी । कुकुर या चरा घाइते भएको देखी भने रुन्थी । कमलो मनकी थिई, भावुक थिई ।
मनीषाकी आमा सुष्मालाई नृत्यमा असाध्यै रुचि थियो, मेरी आमा (सुशीला) लाई पनि थियो । सासू-बुहारी मिलेर नाचेको पनि मलाई याद छ । मनीषाकी आमा भरतनाटयम र मनिपुरी नृत्यकी शिक्षिका थिइन् । धेरैलाई उनले शास्त्री
Posted by maha at 6:28 am	Tagged with: Manisha Koirala, Prakash Koirala
Producer, Actor, Rose Rana Arrested for running illegal Dance Bar Niruta Singh personal preferences